naxariistii dhaawaca Archives - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Tag: naxariistii dhaawaca
Weligaa ma jabisay amar ku saabsan shareecadda ? Midkeenna kasta oo naga mid ah ma doonayo inuu sidan sameeyo, laakiin runtu waxay tahay in badan oo naga mid ah ay qarinayaan guuldarooyinkeenna, annagoo rajeyneynaa in kuwa kale aysan ogaan doonin dembigeenna ayna soo bandhigi doonaan ceebteenna. Laakiin ka waran haddii guuldaradaada la ogaado, maxaad rajeyneysaa intaas ka dib?
Sida ku qoran Surda Luqman (Suuradda 31 – Luqman) ayaa na xusuusinaysaa
tan waa aayaadka Kitaabka (Quraanka) xigmada leh.waana hanuunka iyo naxariista samalfalayaasha.
Surada Luqman 31: 2-3
Surah Luqman waxay cadeyneysaa in ‘kuwa wanaag sameeya’ ay ilaah ka rajeynayaan ‘naxariis’. Marka Surada Al-Hijr (Surah 15 – dhagaxa) waxay weydiinaysaa su’aal aad u muhiim ah
Wuxuuna yidhi yaa ka Quusta Naxariista Eebihiis kuwa Baadida ah mooyee.
Suuradda Al-Hijr 15: 56
Maxaad ka leedahay kuwaa habaabay ama marin habaabay? Howl galkka Ciise ayaa ku saabsanaa kuwaa marin habaabay ama lumay ee aan u baahnayn Naxariis. Nebiga wuxuu fursad u helay in uu tan ku muujiyo qof lagu sheegay inay ceebeysantahay.
Sida ku qoran injiilka ayaa waxa uu sheegataa in arintani ay ku dhacday naag dhalin yara ha goortii wax baristii Ciise Masiix.
Naagtiina waxay qabtay sino
2 Aroortii hore ayuu haddana macbudka yimid, dadkii oo dhammuna way u yimaadeen, oo intuu fadhiistay, ayuu wax baray. 3 Culimmadii iyo Farrisiintii waxay u keeneen naag sino lagu qabtay. Markaasay dhexda joojiyeen, 4 oo waxay isagii ku yidhaahdeen, Macallimow, naagtan waxaa lagu qabtay sino. 5 Hadda Muuse wuxuu sharciga nagu amray in la dhagxiyo tan oo kale, adiguse maxaad ka leedahay iyada? 6 Waxay waxaas u yidhaahdeen, iyagoo jirrabaya, si ay u helaan wax ay ku ashtakeeyaan. Laakiin Ciise waa foororsaday, oo farta ayuu dhulka wax ku qoray. 7 Laakiin goortay sii wadeen inay weyddiiyaan, wuu istaagay, oo wuxuu ku yidhi, Kii idinka mid ah oo aan dembi lahayn, isagu horta dhagax ha ku tuuro. 8 Mar kale ayuu foororsaday, oo haddana dhulka wax ku qoray. 9 Iyagu markay waxaas maqleen, ayay iska daba baxeen midba mid, waayeelladii ka bilaabato ilaa kii u dambeeyey. Ciisena keligiis ayuu hadhay iyo naagtii dhexda joogtay. 10 Ciise ayaa istaagay oo ku yidhi iyadii, Naag yahay, xaggee bay joogaan? Ninna miyaanu ku xukumin? 11 Waxay ku tidhi, Ninna, Sayidow. Ciisena wuxuu ku yidhi, Anna ku xukumi maayo. Soco, oo hadda ka dib ha dembaabin.
Naagtan waxaa lagu qabtay dhaq dhaqaaq ficil Macsiya ah oo Macalamiintii Shareecadii nebi Muuse ayaa doonayay in dhagax lagu dilo,Laakiin markii hore waxay u wadeen xagga Ciise Masiix si ay u arkaan waxa uu goaankiisa yahay. Miyuu taageeri doonaa runta sharciga? (Dhacdo ahaan, sida sharciga waafaqsan ninka iyo naagta labadooduba waxaa lagu xukumay dhagxin, laakiin Naagta keliya waxaa loo keenayin la ciqaab.)
Cadaaladda Ilaah iyo Dembiga aadanaha.
Ciise Masiix kama hor imaanin sharciga,waayo waxaay ahayd wuxuu ahaa sharci uu Ilaah keenay oo ka turjumaya caddaaladda buuxda,Laakiin Ciise Masiix wuxuu ku yiri, kuwa aan dembiga lahayn ha ku tuura dhagaxa. Sida ay macallimiintu ogu fikirayeen tan, Waxa uu dul saaray xaqiiqada ku jirta Sabuuradda oo ah
Rabbigu samaduu ka soo fiiriyey binu-aadmiga,
Inuu arko haddii ay jiraan kuwo wax garanaya,
Oo Ilaah doondoona.
3 Dhammaantood gees bay u wada leexdeen, oo way wada nijaasoobeen,
Mid wanaag falaa ma jiro, midnaba.
Tan macnaheedu ma aha oo keliya kuwa aan rumeysadka lahayn, kufaarta iyo mushrikiinta inay dembaabaan – xitaa kuwaa Ilaah rumeeyay iyo nebiyadiisa sidaasoo kale way dambaabaan rumeeya Eebe iyo rasuulkiisa iyaguna way dembaabaan. Dhab ahaantii, sida ku xusan aayadahan, marka Ilaah eegay Aadanaha wuxuu ogaaday inuu jirin hal qof oo wanaag sameeyay.
Sharcigii Nebi Muuse waxay ahayd Hashiis uu Ilaah la galay aadanaha oo ku saleysan cadaalad buuxdda, oo kuwaa raacaayna waxay helayaan xaqnimo. Laakiin jaangooyooyinku waa dhammaystiran yihiin, iyada oo aan xitaa hal wecsanaan ah aan loo oggolaan.
Laakiin ,maadaama ay ‘dhammaantood kharibmeen’, qorshe kale ayaa loo baahnaa. Qurshahan kale Ayaan ahayd middan cadaalad ku saleeysan mid u qalanta – maxaa yeelay dadku ma gudan karaan waajibaadkooda sharciga ah – marka waa in lagu saleeyaa dabeecad kale oo Ilaah – naxariisa ah. Oo Naxariis ayuu u fidin lahaa meeshii waajibka ahayd. Tani waxay ahayd mid laga filaayay sharciga nebi Muuse markii wankii Iidda Kormaridda naxariis iyo nolol u siiyay kuwii albaabkooda ku rinjiyeeyey iyo Baqara oo ah ( suuradda 2 – Baqarah – oo loogu magic ka dib) Harun. Xitaa ka hor waxaa la sii saadaalinayay taas ka dib markii dharka Adam loogu naxariistay, Alla baraygii Haabiil , iyo naxariistii la siiyay nebi Nuux . Waxaa sidoo kale Axdigii hore lagu arkaa markii Eebe ballanqaaday taas,Sida ku qoran
oo leh dambigan ayaa waxaan dhula ka qaadi doonaa maalin qudha.
Zekariyaah 3: 9
Hadda Ciise Masiix wuxuu naxariis u fidiyay qof aan rajo kale lahayn . Waxaa xiiso leh in aan la xusin ama naagta shuruud laga dhigin diinta. haweenaydan. Waxaan ognahay inuu Ciise Masiix nagu baray Wacdigii buurta Sida ku qoran
7 Waxaa barakaysan kuwa naxariista leh, waayo, waa loo naxariisan doonaa.
Ninna ha xukumina inaan laydin xukumin. 2 Waayo, xukunkii aad ku xukuntaan ayaa laydinku xukumi doonaa, oo qiyaastii aad ku qiyaastaan ayaa laydinku qiyaasi doonaa .
Kordhiso Naxariista si aad u hesho Naxariis
Adiga iyo anigba waxaan maalinta xukunka u baahanahay inay naxariista noo korodho maalinta xukunka ama xitaabta. Ciise Masiix wuxuu ogolaaday inuu u gudbiyo Qof si cad ammarada u jebiyay – kaasoo aan u qalmin. Laakiin waxan u baahan nahay sidoo kale u naxariisno kuwa hareereena ah. Sida uu nebigu u sheegay, heerka naxariista ee aan fidinno in la eg oo naxariis ah ayaan heli doonno. Waa sababta oo ah inaan si dhaqso leh u xukuno dembiyada kuwa kale taasoo khilaaf badan inaga keeni karto. Way fiicnaan laheyd inaan u naxariisno kuwa na dhaawacay. Aan weydiisano Eebbe inuu naga caawiyo inaan noqonno dad kuwa uu Ciise Masiix uu u naxariistay iyagoo aan u qalmin, sidaa darteed innaga oo aan u qalmin, waxaan sidoo kale heli karnaa Naxariis markii aan u baahano. Markaa waxaan diyaar u nahay in aan fahanno naxariista naloogu deeqay warka wanaagsan ee Injilka.
Author [email protected]Posted on 09/05/2020 09/05/2020 Categories Injiilka shaaca ka qaadayTags allaah iyo naxariistii allah, naxariistii allah, naxariistii dhaawaca, naxariistii isa al masih, waa al masih iyo naxariis, waa naag iyo sino